कञ्चनपुरका अर्का एक युवा, जसलाई प्रहरीले ११ दिन थुन्यो ! | जनदिशा
कञ्चनपुरका अर्का एक युवा, जसलाई प्रहरीले ११ दिन थुन्यो !
१३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले अर्का एक निर्दोषलाई पनि पक्राउ गरेको खुलेको छ ।
११ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेर छुटेका २३ वर्षे चक्र बडू अहिले पनि आतंकित छन् । तर, अनुसन्धानमा उनी पनि पक्राउ परेका थिए भन्ने प्रहरीले कसैलाई पनि जानकारी गराएको छैन ।
दीपक नेगीलाई पनि प्रहरीले हचुवाकै भरमा पक्राउ गरेको भट्ट बताउँछन् ।
निर्मलालाई खोज्ने क्रममा ५ प्रहरी र करिब ५० स्थानीय खटिएका थिए । प्रहरीले नै स्थानीयलाई समूहमा बाँडे । सबैभन्दा पहिला दीपकले शव देखे र प्रहरीलाई खबर गरे । पछि प्रहरीले ‘तैले कसरी थाहा पाइस् ?’ भन्दै उनलाई पनि पक्राउ ग-यो । ‘मैले पहिला शव देखेको भए मलाई नै पक्राउ गर्ने रहेछन्,’ साढे दुई दशकदेखि शिक्षण पेसामा रहेका भट्टले भने ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
Previous Previous post: काम नभए पनि बसीबसी भत्ता !
Next Next post: बिम्स्टेकः विशिष्ट पाहुना नेपाल आउने क्रम सुरु, सुरक्षा कमाण्ड नेपाली सेनाले गर्दै